शङ्कर समूह : व्यवसाय विस्तारको रणनीति | गृहपृष्ठ
Home कम्पनी प्रोफाइल शङ्कर समूह : व्यवसाय विस्तारको रणनीति
on: १४ असार २०७५, बिहीबार ०८:२४ कम्पनी प्रोफाइल, बजार
सिमेण्ट, प्लाष्टिक र स्टिलका वस्तु उत्पादन गर्ने शङ्कर समूह नेपालका महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक घरानामध्येको एक हो । अहिले यस समूहअन्तर्गत रहेका ३० ओटा कम्पनीहरूबाट वार्षिक रू. ७० अर्बको कारोबार हुने गरेको छ ।
शङ्कर समूह नेपालका खानी, सिमेण्ट, स्टिल, सिन्थेटिक्स, तयारी पोशाक, दैनिक आवश्यकताका छिटो विक्री हुने उपभोग्य वस्तु (एफएमसीजी), व्यापार, बीमा, सेवा व्यापार र आवास निर्माणमा संलग्न छ । समूहअन्तर्गतका कम्पनीले १५ सयभन्दा धेरैलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् ।
समूह अहिले ऊर्जाका परियोजनामा लगानी बढाउने र ठूलो क्षमताको सिमेण्ट प्लाण्ट स्थापना गरी वार्षिक कारोबारलाई रू. ७० अर्बबाट बढाएर रू. १ खर्बभन्दा बढी पु¥याउन केन्द्रित छ, जसका लागि समूहले मदिरा उद्योगमा मेशिन जडान गर्ने काम गरेको छ । समूहका सिमेण्ट, प्लाष्टिक र लत्ताकपडा उद्योग बहुप्रतिष्ठित सौरभ समूहसँग र रिद्धिसिद्धि सिमेण्ट भारतको अम्बे समूहसँगको सहकार्यमा चलिरहेका छन् ।
तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीबाट सम्मान लिँदै समूहका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवाल
शङ्कर समूहको इतिहास
व्यापार व्यवसायमा सफलता पाएपछि समूहका संस्थापक रावतमल गोल्यानले सन् १९६० मा सियोधागो र टाँक (बटन)को उद्योग ‘सउ उद्योग’ स्थापना गरेका थिए । सउ उद्योग नेपालमा स्थापना भएकामध्ये यो पहिलो उद्योग थियो । यही उद्योगलाई समूहको औद्योगिक यात्राको प्रस्थानबिन्दु मानिन्छ ।
सो उद्योग सफल त भएन, तापनि समूहका सदस्यलाई पछि गएर यसले अरू उद्योग स्थापना गर्ने प्रेरणा दियो । असफल सउ उद्योग नै समूहको औद्योगिक यात्राको पहिलो र महŒवपूर्ण खुड्किलो भने बन्यो ।
शङ्कर समूहले सन् १९९४ मा जगदम्बा स्टिल्स र सन् २००१ मा जगदम्बा सिमेण्ट स्थापना गरी औद्योगिक उत्पादनलाई बजार पठाउन थालेसँगै उत्पादन क्षेत्रमा समूहको क्रियाशीलता बढेको हो । त्यसपछि जगदम्बा सिन्थेटिक्सबाट सिन्थेटिक धागो र जगदम्बा इण्टरप्राइजेजबाट पाइप, ट्युब, टीएमटी छडलगायत उत्पादन हुन थालेपछि समूहले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन ।
सन् २००१ मै स्थापना भएको जगदम्बा इण्टरप्राइजेजले सन् २००६ देखि नेपालमा टाटा स्टिलियमको आधिकारिक विक्रेताको पहिचान बनाएको छ । सन् २०१४ बाट शङ्कर समूहले भारतको प्रतिष्ठित अम्बे समूहसँगको साझेदारीमा ६ करोड डलर लगानीमा रिद्धिसिद्धि सिमेण्ट स्थापना गरेको हो ।
नक्सालमा स्थापना भएको डबल ट्री बाई हिल्टन होटल समूहअन्तर्गतकै हो । डबल ट्री हिल्टन विश्वको सबैभन्दा ठूलो होटल सञ्जाल भएको हिल्टन होटल एण्ड रिसोर्टको सदस्य हो ।
रावतमल गोल्यान को हुन् ?
शङ्कर समूहको जग बसाउने रावतमल गोल्यान अहिलेको म्यानमारबाट आएका हुन् । उनी वर्षाैं पहिले व्यापार व्यवसायको अवसर खोज्दै नेपाल आएका थिए । गोल्यानले नै नेपालमा पहिलोपटक टाँक उद्योग स्थापना गरेका थिए । सो उद्योग असफल भएपछि गोल्यान उद्यमक्षेत्र छोडेर पुनः व्यापारमै फर्किएका थिए । शङ्कर समूहका अध्यक्ष शङ्करलाल अग्रवाल रावतमलका कान्छा छोरा हुन् ।
शङ्करलालले सन् १९७९ मा शङ्कर समूहको औपचारिक स्थापना गरेका हुन् । शुरुवाती दिनमा शङ्करलाल बुबालाई फेब्रिकको कारोबारमा सघाउँथे । सोही क्रममा सन् १९८० को मध्यतिरबाट शङ्करलालले विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डका कारोबार थालेका थिए ।
शङ्कर समूहको प्रमुख व्यवसाय
फलाम तथा सिमेण्ट
समूहमा जगदम्बा सञ्जालका १४ ओटा उद्योग छन् । जसले विविध खालका वस्तु उत्पादन, विक्रीवितरण र व्यावसायिक आवश्यकता पूर्तिको लक्ष्य लिएका छन् । वीरगञ्जको जगदम्बा स्टिल्स र जगदम्बा वायर्शबाट समूहले स्टिलका तारजाली, पाइप, डण्डी, किल्ला तथा भवन निर्माणमा प्रयोग हुने अन्य सामग्री उत्पादन तथा विक्रीवितरण गर्छ ।
त्यसैगरी जगदम्बा इण्टरप्राइजेज इण्डष्ट्रिज, जगदम्बा सिमेण्ट र रिद्धिसिद्धि सिमेण्टले जगदम्बा, अल्ट्रा र फोर्श सिमेण्ट उत्पादन गरी स्वदेशी बजारमा आपूर्ति गर्छन् । देशको विभिन्न ठाउँका खानी प्रयोग गरेर समूहले उल्लिखित ब्राण्डका सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गर्छ । समूहले उल्लेख भएका बाहेक विभिन्नखालका प्लाष्टिकका सामग्री पनि बनाउँदै आएको छ । समूहले उत्पादन गर्ने धागो र तयारी पोशाक अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्यात हुन्छ, अरू सबै उत्पादन स्वदेशी बजारमा विक्रीवितरण हुन्छ ।
समूहले सिमेण्टबाहेक धागो, कपडा, तयारी पोशाक र अत्यावश्यक छिटो विक्री हुने उपभोग्य वस्तु (एफएमसीजी)को उत्पादन, प्रशोधन तथा विक्रीवितरण पनि गर्छ । धागो र सम्बन्धित कारोबार जगदम्बा सिन्थेटिक्स, शङ्कर सिन्थेटिक्स र जगदम्बा स्पिनिङ मिल्सबाट हुन्छ । समूहको वीरगञ्ज मेनरोडमा रहेको शङ्कर सिन्थेटिकले धागो कपडा र तयारी पोशाक तयार गर्ने गरेको छ । जगदम्बा फूड प्रोसेसिङ र जगदम्बा फ्लावर एण्ड एग्रोले अत्यावश्यक खाद्यवस्तु प्रशोधन तथा विक्रीवितरण गर्छ ।
समूहले एक्जोटिक एडभेञ्चर्श एण्ड टुर्शमार्फत पर्यटन क्षेत्रको कारोबार सञ्चालन गर्छ । मुख्यगरी पर्यटकलाई जङ्गल सफारी, एडभेञ्चर खेल र अन्य विविध सेवा दिने गरेको कम्पनीले बताएको छ । नेपालमा एडभेञ्चरका लागि बञ्जी जम्प, र्‍याफ्टिङ, साइकल यात्रा गर्ने र विभिन्न पहाडमा हाइकिङ जाने प्रचलन छ । समूहले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई एडभेञ्चरका लागि विभिन्न ठाउँको भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउने गरेको छ ।
समूहले ६ ओटा अलग–अलग फर्मबाट व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्छ । नाकासु र जगदम्बा मोटर्शले सवारीसाधनको खरीदविक्री र मर्मतसम्भारको सेवा दिन्छन् भने फोर्श कन्स्ट्रक्सन एण्ड एशोसिएट्सले भवन निर्माण तथा निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम गर्छ । त्यसैगरी जगदम्बा ओभरसिजले मानव संसाधनसम्बन्धी सेवा दिन्छ । सौरभ फोटो इण्टरनेशनल र जगदम्बा मोबाइल्सले भने प्राविधिक क्षेत्रका काम गर्छन् ।
३० कम्पनीबाट वार्षिक रू. ७० अर्बको कारोबार
१५०० भन्दा धेरैलाई प्रत्यक्ष रोजगारी
शङ्कर समूहको सिमेन्ट, प्लाष्टिक र तयारी पोशाक उत्पादन इकाइमा सौरभ समूह र रिद्धिसिद्धि सिमेण्टले अम्बे समूहसँग साझेदारी/सहकार्य
जगदम्बा सिमेण्ट उद्योग
जगदम्बा फूड प्रोसेसिङ
जगदम्बा फ्लोर एण्ड एग्रो
जगदम्बा अल्को वेभ
रिद्धिसिद्धि माइन्स एण्ड मिनरल्स
जगदम्बा सेवा व्यापार समूह
एक्जोटिक एडभेञ्चर टुर्श
फोर्स कन्स्ट्रक्सन एण्ड एशोसिएशन
सौरभ फोटो इण्टरनेशनल
समूहका लगानी योजना
डबल ट्री बाई हिल्टन होटल सञ्चालन गर्ने
पूर्वी नेपालमा ठूलो परिमाणको सिमेण्ट उत्पादन प्लाण्ट स्थापना गर्ने
भैरहवामा सिमेण्टको प्लाण्ट स्थापना गर्ने
ऊर्जाका परियोजनामा लगानी गर्ने
वीरगञ्जमा टीभीएसको एसेम्ब्लिङप्लाण्ट लगाउने
स्टिलको प्लाण्टलाई विस्तार गर्ने
मदिरा उद्योगका लागि मेशिन स्थापना गर्ने